महान श्रीमान बिनोदकी श्रीमतीको पछील्लो अवस्था यस्तो, बोल्न सक्ने भइन ! कहिले फर्किदैछन घर ? (स्वास्थ्य लाभको कामना) - Onlines Time
महान श्रीमान बिनोदकी श्रीमतीको पछील्लो अवस्था यस्तो, बोल्न सक्ने भइन ! कहिले फर्किदैछन घर ? (स्वास्थ्य लाभको कामना)
महान श्रीमान बिनोदकी श्रीमतीको पछील्लो अवस्था यस्तो, बोल्न सक्ने भइन ! कहिले फर्किदैछन घर ? Binod
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आक्रमक देखिएका छन् । सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रमकरुपमा अगाडि बढेका हुन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत रहेको छ । पार्टी कमिटीमा अल्मतमा रहे पनि संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीको साथ पाइने भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क रहेको स्रोतको दाबी छ । वैधानिकरुपमा ओलीलाई हटाउन संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ । अनलाइन दैनिक बाट साभार
Prevखु* कुरीले टुक्रा टुक्रा पारेको देख्ने बाजे मिडियामा, खु’ल्यो नसो ‘चेकै र’ हस्य
Nextफुल टिप्न खोज्दा यसरी गएको रहेछ पाइलटको ज्या न ! फेरी किन फर्कीएका थिए फुलको बोटमा